कथा | अन्तिम पत्र – teddyarpana
कथा | अन्तिम पत्र
रिसाएका छौ, थाहा छ मलाई। रिसाउनै पर्ने हो, तिमिलाई पूरा हक छ। यो पटक त कारण पनि छ, कुनै जानकारी बिनानै यति टाढा जो आएकी छु। तर म के गर्न सक्थी र? बाध्यता थियो।
मान्छु कि मैले तिमी माथि अन्याय गरेकी छु। तर मलाई विश्वास गर, यस्तो म कदापी चाहन्नथि। मेरो सारा उमेर तिमी सङ्गै बिताउन चाहन्थि। हरेक पल, हरेक क्षण बस् म तिम्रो साथ चाहन्थि र चाहन्छु पनि। यो पत्र लेख्नु मेरो जिन्दगीको सबैभन्दा कठिन पल हो। आफ्नो मनलाई बाधेर अश्रुधारा बगाएर लेखेकी छु। तिमिलाई थाहा छ किन? किनकी तिमिलाई अलबिदा भन्दै छु यहि पत्र मार्फत। सायद म जिउँदो फर्कन्न होला। यी सब कुरा म यहि पत्र मार्फत भन्दैछु किनकी तिम्रा अगाडि आएर आँखामा आँखा जुधाएर भन्ने साहस छैन म मा। फेरि तिम्रो अगाडि अनि तिम्रो मायाको अगाडि म कमजोर हुनेछु र मेरा पाइलाहरु अघि बड्दैनन् तिम्लाइ छोडेर। यसो भनिरहदा तिम्लाइ चोट पुर्याएको छु मैले। घाउ गहिरो छ थाहा छ मलाई। तिमी पीडामा छौ त्यो कुरा बुझ्छु म। अनि कस्तो अनौठो छ है समयको खेल। कुनै बेला तिम्रो घाउको मलम हुने गर्थि म तर हेर त आज मैले नै सबैभन्दा गहिरो चोट दिएकी छु। तर बिबश छु म, म तिम्री पत्नीका साथसाथै एक सिफाही पनि हुँ। मैले आफ्नो देशका निम्ति ब्यक्तिगत
स्वार्थबाट माथी उठेर सेवा गर्ने, कर्तब्य पालना गर्ने कसम खाएको छु र आफै सङ्ग प्रण गरेकी छु।
तर अशोक प्रेम पाउनु मात्र पनि त होइन, प्रेम त्याग पनि त हो, समर्पण पनि त हो। मेरो बिदाई तिम्रो जिवनको अन्त्य होइन प्रिय। तिम्ले सुरुवात गर्नु पर्छ नयाँ जिन्दगिको। हो चोट पुगेको छ तिम्लाई तर हरेक चोट को ओखती हुन्छ, मलम हुन्छ र मलाई विश्वास छ तिम्रा गहिरा चोटहरु समयसङ्गै पुरिनेछन् खाटो पनि नरहने गरि।
प्रिय, तिमिसङ्ग सधै साथै हुनेछन् ती मिठा पल अनि यादहरु। तर म चाहन्नकी तिमी पुराना दिन सम्झेर पलपल तड्पेर बस्। मेरो प्रेम आजका दिन सम्म सधै तिम्रो तागत बनेको छ। तर अब यसैलाई कमजोरी नबनाउ र जीवन अझ कठिन नबनाउ। तिम्ले आफ्नो जीवन पहिले झै निर्वाह गर्नुपर्छ जसरी मसङ्ग हुँदा गर्थ्यौ। तिमि पछाडी हट्न हुदैन। हेर त! तिम्ले कति सपनाहरु साकार पार्नु छ। तिम्रा सपना, हाम्रा सपनाहरू, आमाबुवाका सपना अझै कति कुरा गर्न बाँकी छ तिम्ले। तिम्ले आफ्ना पाउहरु कहिल्यै नकमाउनु। आफ्नो कर्तब्यपथबाट आजसम्म तिमी पछि हटेका छैनौर अब पबि कत्तिपनि नडगमगाउनु।
बाँकी कुरा अर्को पत्रमा लेख्छु कास यस्तै केही लेख्न पाए त हुन्थ्यो नि।तर सायद अब मौका मिल्दैन होला। तिमि सङ्ग बिताएका हरेक पलहरु स्वर्णिम थिए। यति धेरै माया ममता र सम्मानको लागि धन्यवाद। थाहा छ तिम्लाई कहिलेकाही त आफैदेखि नै ईष्र्या लाग्थ्यो, आफ्नै भाग्य देखेर डाहा लाग्थ्यो मलाई किनकी जिवनमा हरेक कुरा मैले चाहेजस्तै थियो। कार्य सफलता, प्रियजनसङ्गको सामिप्यता, तिमी जस्तो जिवनसाथी अनि तिम्रो अधिक माया र सम्मानले स्वर्गको आभाष हुन्थ्यो मलाई।तर यो स्वर्गबाट टाढा हुदैछु म। कति छोटो रैछ है हाम्रो माया।
अन्तिममा, यहि भन्छु प्रेममा विश्वास गर र तिम्रो धड्कनहरुलाई अरु कसैको लागि धड्कन मन्जुरी देउ। मैले भन्दा धेरै माया गर्ने जिवनसङ्गिनिको लायक छौ तिमि। जिन्दगिमा सदाझै अगाडि बढ पछाडी फर्केर नहेर। तिम्लाई उज्ज्वल भबिष्यले पर्खिबसेको छ।
पढ्दापढ्दै कतिखेर आँसु झरेछ पत्तै पाइन मैले।त्यो पत्रमा उनले शब्दहरु मात्र लेखेकी थिइनन् भावना उतारेकी थिइन। अशोक चाहन्थ्यो हाम्रो विवाह तय हुनुभन्दा अगाडि नै उसका बितेका हरेक घटनाहरु मैले थाहा पाँउ। त्यसैले साँझको खानाको निम्तो दिएको थियो। अनि छुटिने समयमा पत्र थमाएको थियो मेरो हातमा। उसो त यो बिवाह उस्को इच्छाले भन्दापनि आमाबुवाको खुशिको लागि करकापमा गर्दै थियो। पछि थाहा पाँए स्वेताको दोहोरो भिडन्तमा परि घटनास्थलमै मृत्यु भएछ। त्यहि पत्र नै थियो उस्को अन्तिम पत्र। कति गहिरो चोट लिएर मुस्कुराएको रैछ अशोक बल्ल बुझ्दै थिए मैले। एकाएक अशोकको असाध्यै माया लाग्यो तर त्यो सहानुभुति थिएन न त दया नै। थियो त बस् मुटुभरिको माया अनि सम्मान उस्को इमान्दारिता प्रती।
24 Jun 2016 Arpanastoryemotions, feeling
Previous Post साचो प्रेम
Next Post गजल